निश्चित रूपमा तपाईले सुशीको बारेमा सुन्नु भएको छ, कि जापानी खानामा चामल र कच्चा माछा छ। सुशीको दुनिया धेरै फराकिलो छ किनकि उनीहरूले धेरै प्रकारका सुशी बनाउन सक्छन् सृजनात्मक जति कुक यो तयार गर्दछ। सुशी प्राय: जापानी शैली, समुद्री खाना (ताजा माछा, झींगा, समुद्री शैवाल, ...) र तरकारीहरूमा पकाइएको चामलको साथ बनाईन्छ। यद्यपि के भिन्नताहरू कम्पोज गरिएको सामग्रीहरू हुन्। तल हामी तपाईंलाई सुशीका विभिन्न प्रकारहरू देखाउँदछौं, जसले निश्चित तपाईंको विचारहरू स्पष्ट पार्दछ ।
यो उत्तम ज्ञात तरिका हो। यसमा चामलको लम्बाइको बल बनाउनु र त्यसमा ताजा माछाको एक पट्टी, जापानी आमलेट, आदि समावेश हुन्छ। पूरै निगुइरीलाई काट्नको लागि अनुमति दिन सुशीको आकार पर्याप्त सानो हुनुपर्दछ। साथीको रूपमा तपाईं माछाको भागमा सोया सॉसको साथमा फैलिन सक्नुहुन्छ।
जापानीमा माकीको अर्थ रोल अप हुन्छ। यो उरामाकी प्रकारको भिन्नता हो, भिन्नताका साथ यो सुशी बाहिरी रूपमा समुद्री शैवालको एक टुक्रा (नोरी) द्वारा घुमाइन्छ । तपाईं ताजा र साल्मन, काकडी, फिलाडेल्फिया पनीर, ताजा माछा बनाउन सक्नुहुनेछ ... चकलेटको साथ पनि केरा! हामीले भनेझैं, सुशी तयार गर्दा कुकले आफ्नो कल्पना उडान गर्न सक्छ।
यो सुशीले कुनै चीजलाई स around्केत गर्दछ जुन घुम्न गएको छ, कि यी माकीहरूको विशेषता भनेको चामललाई छोडियो र सामग्रीहरू नोरिड समुद्री समुद्री समुद्री समुद्री समुद्री समुद्री समुद्री समुद्री समुद्री समुद्री घडीमा बनाइन्छ। यो प्राय: तिल वा सानो रो बाहिर पकाइन्छ।
टे, जापानी भाषामा, यसको अर्थ हात र माकी हो जुन हामीले रोल अघि भन्यौं। को emaki टी त्यसैले हस्तनिर्मित रोल, आकार मा चोटीदार छन्। तिनीहरू टाकोस र मेक्सिकन fajitas सँग मिल्दोजुल्दो छन् जुन भिन्नै छन जुन नुरी समुद्री शैवाल यहाँ रोल सतहको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अवयवहरूको सम्बन्धमा, यसले मकिहरूसँग समान कार्य गर्दछ।
केही मानिसहरू वास्तवमा द्वारा सुशी साशिमि संग भ्रममा चामल लिन गर्दैन तर कुनै गल्ती बनाउन: को साशिमि सुशी को एक प्रकार छ। जस्तो हामीले भन्यौं कि यो एक मात्र प्रकार छ जुन चावल प्रयोग नगरी बनिएको हो, यो ताजा कच्चा माछाको थाल मात्र हो। साशिमीको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा माछा मार्ने तरीका हो जुन टुक्रा एकदम पातलो वा धेरै बाक्लो काटिएकोले माछाको स्वादमा परिवर्तन ल्याउँछ। साथै, तपाईं प्रयोग गर्न चाहानु भएको माछाको प्रकारमा निर्भर गर्दछ, यो काटिएको वा अर्को प्रकारको प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। एक जिज्ञासाको रूपमा, पफर फिश (जापानीमा फगु ) एक सबैभन्दा उत्तम व्यंजन हो जुन अस्तित्वमा छ, तर कसरी कटौती गरिन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै, फुगु सशिमीको एक टुक्रा खानु विषाक्त र घातक पनि हुन सक्छ। केवल विशेष शेफहरू फुगु लाई डिनरमा सेवा गर्ने हिम्मत गर्छन्।
र अब तपाईंले सुशीको यी शानदार फोटोहरू देख्नुभयो, के तपाईंले यसलाई खान्नु भएको छैन? के माकीस तपाईलाई मन पर्छ? वा तपाई निगुइरिसबाट धेरै हुनुहुन्छ? तपाईं Sashimi संग हिम्मत गर्नुहुन्छ? सुशी खाँदा तपाईं कुन सामग्रीको संयोजन रुचाउनुहुन्छ? हामी तपाईंको उत्तरहरूको लागि पर्खिरहेका छौं, र यदि तपाईंलाई रमाईलो लाग्यो भने, यसलाई आफ्ना साथीहरू र परिवारसँग साझा गर्नुहोस्!
कीराको काटनका प्रकारहरू
बंदरहरू, प्रजातिहरू र एप्सको प्रकारहरू
राम्रो इन्टरनेट बुल टेरियर (र सबै भन्दा रचनात्मक मालिक)
सबैभन्दा लत लागूपदार्थ